Yini ongayenza ukuze usondelane noNkulunkulu? Sesixoxe ngalezi zinto ezimbalwa ongazenza ukuze uhlakulele ubuhlobo obuseduze noNkulunkulu:
Ukwazi nokusebenzisa igama likaNkulunkulu elithi Jehova.
Ukuxhumana naye njalo ngomthandazo nangokutadisha iZwi lakhe iBhayibheli.
Ukuphikelela ekwenzeni lokho okujabulisa uJehova.
Sondela kuNkulunkulu ngokusebenzisa igama lakhe, ngokuthandaza kuye, ngokutadisha iZwi lakhe nangokwenza lokho okumjabulisayo
Ngokwalokhu osekubaliwe, ungasho yini ukuthi wenza okudingekayo ukuze usondele kuNkulunkulu? Zikhona yini izici ongathuthukisa kuzo? Kuyaqondakala ukuthi kudingeka umzamo, kodwa cabanga ngemiphumela.
UJennifer, ohlala e-United States uthi: “Konke okwenzayo ukuze uhlakulele ubuhlobo obuseduze noNkulunkulu kuwufanele umzamo. Lobu buhlobo buletha izibusiso eziningi: ukwethembela kuNkulunkulu kakhudlwana, ukuqonda ubuntu bakhe ngokwengeziwe, kodwa ngaphezu kwakho konke, ukumthanda ngokwengeziwe. Ayikho indlela yokuphila engcono kunale!”
Uma ungathanda ukuba nobuhlobo obuseduze noNkulunkulu, oFakazi BakaJehova bayokujabulela ukukusiza. Bangahlela ukutadisha nawe iBhayibheli mahhala. Zizwe ukhululekile nokuya emihlanganweni yabo yeBhayibheli eHholo LoMbuso langakini, lapho uyohlangana khona nalabo ababazisayo ubuhlobo babo noNkulunkulu. * Njengoba wenza kanjalo, nawe uyozizwa njengomhubi owathi: “Kepha mina, ukusondela kuNkulunkulu kuhle kimi.”—IHubo 73:28.
^ isig. 9 Ukuze uthole umuntu ozofunda nawe iBhayibheli noma ukuze uthole ukuthi likuphi iHholo LoMbuso eliseduze nawe, sicela ukhulume nomuntu okunike lo magazini noma ungene engosini yethu ethi www.jw.org/zu, ubheke ngaphansi kwesithi XHUMANA NATHI ekugcineni kwekhasi.
Thumelela Thumelela Ayikho Indlela Yokuphila Engcono Kunale